Kilalao miendrika biriky miloko lalao - hilalao afaka amin'ny Lalao - Lalao
Kilalao miendrika biriky miloko lalao
Alohan'ny lalao maimaim-poana amin'ny Internet vato miloko, ary angamba mahay milalao azy. Kilalao tsirairay manana ny fitsipika, fa mba hahatakatra azy mora foana. Indraindray tsy maintsy hitifitra ny anankiray vondrona loko amin'ny alalan'ny fandefasana azy ireo ny baolina izay mampihetsi-po fa nitontontontona eny ny sehatra. Namely ny lasibatra, dia mandringana azy. Indray mandeha koa, manana tarihiny ary milatsaka zavatra hanorina rojo izy ireo, ary avy eo dia hanjavona koa izy ireo. Interesting piozila dia manolotra tarihiny ary milatsaka ny vato mihidy ao anatin'ny kianja, mba hahazo azy ireo amin'ny alalan'ny fanokafana iray. Ireo sy ny dikan-dia aseho maimaim-poana.
Bloxorz: Manoritra ny Block
Snake Ary Blocks
Ball Brick Super
Hadino ny piozila Jewell
Manimba ny sakana
Kitapo lalao ankamantatra
Lalao Mena Blocks tamin'ny Category:
Farany Kilalao miendrika biriky miloko lalao
Esory ireo sakana
Sakano aho izao
Lokoy ireo sakana
Stack Tower Neon: tazomy ny mizana
Amboary ny piozila isa Block
Mpamadika biriky Pokemon
Piozila Block sivy
Rakhi Block Block
Lalao Online Rehetra Kilalao miendrika biriky miloko lalao
Lalao biriky miloko – manangona ka torotoro
Ny ankehitriny dikan-tenin'ny aterineto vato miloko lalao avy ao Tetris, izay tsy maintsy handefa zana-tsipìka cubes, tsipika mahitsy sy ny fialan-tsasatra ka nibodo ny toerana eo amin'ny farany ambany any an-tsaha nilahatra tany milamina andalana. Tarehimarika tsirairay dia tsy maintsy ho tonga araka ny sela malalaka mitovy endrika. Rehefa avy namorona maro amin'ny fotoana feno sela, dia manjavona, ary eo amin'ny toerana misy mifanaraka amin'ny endrika vaovao.
Taty aoriana dia tonga ny loko Tetris, ary avy eo dia fety mitovy amin'ny virtoaly maro mahafinaritra. Ankehitriny, ny dingana efa nahazo tsirony, ho tonga bebe kokoa mamorona. Cubes matetika manome lalana ho tsara tarehy tarehy, fanaka, olombelona postures, vato sarobidy.
Ny gameplay dia tsotra – tarihiny singa mila mitovy ny lokony, ary indraindray ny habeny. Raha nahavita hanangona vondrona telo doko sy ny maro hafa singa, dia manjavona, nivadika ho teboka. Maro misesy fanonganam-panjakana ny maro ny vato, ary tsy hahazo be lavitra hevitra, fa mahazo koa artifact sarobidy.
Ny hery mahasoa-dehibe
fahazoana tsirairay dia amin'ny fotoana mahamety izany, raha ny fandehan'ny fotoana tsy maintsy ho farany, fa mbola mijanona an-tsaha unplayed lalao. Mixers, afangaro singa ka hanao azy ireo ho any amin'ny filaminana vaovao izay ny mora kokoa ny manolotra laharana lava be toy izany koa ny loko. Hatchets sy potika handika sakana handehananareo any amin'ny dingana sarotra kokoa sy famaranana sakana. Watch manome fotoana fanampiny sy handringana amin'ny toeram-pitrandrahana ny zavatra teo an-tsaha.
Raha ny lalao ambaratonga maro, ianao manana mihoatra ny iray alina taorian'ny kilalao mahafinaritra. Ny ho za-draharaha kokoa ianao, dia vao mainka ny masonao misy tombony fanodinkodinana sy ny tombontsoa mitombo. Ny mainka manaitra noho izany ny famoriam-bola, ny tsy azo inoana kokoa hatao niraikitra teny an-dalana ho any fahombiazana.
mahaliana lojika ny lalao vato miloko
Play ny vato miloko dia ny hamaha lojika-tsaina, izay misolo tena ao amin'ny saika endrika faran'izay tsotra. Izy ireo dia mora ny manatsara ny faralahy gamer fa tsy tsy mety milalao mpiasa birao. Rehetra tsy maintsy atao dia ny:
Fidio ny lohahevitra
mahay mihazona ny totozy
mba hahatakatra ny asa
Mety ho tsotra tarihiny ary milatsaka singa, na tsy lavitra teo Manitrika any an-tantara. Mety tsara ho any amin'ny lava-bato ny efa-polo mpangalatra izay tsy hay lazaina no nanafina harena. Hisambotra azy ireo, ary dia ilaina ihany ny hanangona eo amin'ny mitovy tarehimarika, ny fanorenana azy ireo.
Azo atao ny hitifitra vondrona sampahom-boaloboka eo amin'ny tampon-lamba avy amin'ny tafondro ihany akorandriaka ny alokaloka. Toy ireo vondrona ireo indraindray ny endrika tsara tarehy, voankazo, kintana, vato mamirapiratra. Ny 3D modely ny hery mampifandray Nanodidina fahitana ny zava-misy, ary hanao zavatra amim-pitandremana kokoa.
Ny mahaliana dikan-ny lalao eo amin'ny vato, rehefa ilaina ny vanobe koa samy hametraka biriky, ny fanorenana trano vaovao. Teknolojia toy ny Tetris – zana-tsipìka hizotra mankany amin'ny iray hafa clutch, nitady ny mety sela ny endriny.
Noho ny marina kajy sy ny fahaizan'ny ianao dia ho afaka ny hisintona Silo vato avy amin'ny iray hafa. Rehetra baoritra ny halava samy hafa, ary mila mahita ny tsara mitambatra ho nandritra ny fampitaovana mifanaraka hanadio ny andalan-teny, ary ny iray avy eo hifindra ho any amin'ny trano manaraka.
isika, dia tsy maintsy hamotipotika ny lohany amin'ny lalao izay te-handrava ny kilalao miendrika biriky, ny baolina nianjera tamin'ny sehatra ka nanakodia an-tanjona. Voalohany, araho ny manosika sy mianatra, satria tsy ho ela dia tsy maintsy hiasa eo amin'ny tenany. Ny haavon'ny sarotra kokoa, ary raha tamin'ny voalohany dia ampy hifindra sakana iray mba hahomby, dia tsy maintsy ankehitriny manaova manipulations vitsivitsy.